2 Ụzọ naghachi Lost Data mgbe Jailbreaking iOS 8 na iOS 8.1
> Resource> Naghachi> 2 Ụzọ naghachi Lost Data maka jailbroken iOS 9 / iOS 8 iPhone / iPad / iPod aka
2 Ụzọ naghachi Lost Data maka jailbroken iOS 9 / iOS 8 iPhone / iPad / iPod aka
Anyị mere a nnyocha e mere,-arịọ ndị mmadụ ma ha chọrọ jailbreak iOS 9 ma ọ bụ iOS 8 na ha iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka na Pangu. The N'ihi na-egosi na 61% nke ndị mmadụ na-aga jailbreak iOS 9 ma ọ bụ iOS 8 na ngwá ọrụ maa. Nke ahụ bụ a otutu. Jailbreaking iOS 9 ma ọ bụ iOS 8, ​​n'ihi na n'aka, ga-erite uru iOS ngwaọrụ ọrụ a otutu. Otú ọ dị, Pangu akpataworo data ọnwụ mgbe jailbreaking iOS 9 na iOS 8, ​​karịsịa photos. Ọ bụrụ na ị na-na na furu efu photos, ozi, kọntaktị, ndetu, kalenda na ndị ọzọ na gị iOS ngwaọrụ mgbe jailbreaking iOS 8 ma ọ bụ iOS 8.1, e nwere ohere n'ihi na ị na-agbake furu efu data maka gị jailbroken iOS 9 ma ọ bụ iOS 8 ngwaọrụ.
Tupu na-ala ọrụ nke na-agbake furu efu data maka jailbroken iOS 9 ma ọ bụ iOS 8 ngwaọrụ, ihe mbụ na-eme bụ ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake). Ọ bụ ụwa # 1 data mgbake software maka iPhone, iPad na iPod aka. Right now, ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iOS 9 na iOS 8.
Ngwọta 1. naghachi Echefuola Data kpọmkwem site jailbroken iOS 8 / 8.1 Devices
Ngwọta 2. naghachi Echefuola Data maka jailbroken iOS 8 / 8.1 ngwaọrụ site na iTunes ndabere
Download free ikpe version nke iOS 9 ngwaọrụ data mgbake n'okpuru nwere a-agbalị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iOS 9 ma ọ bụ iOS 8 ngwaọrụ gị na kọmputa site na ya eriri USB. Download Wondershare Dr.Fone maka iOS. Wụnye na ẹkedori ya na kọmputa gị. Site na isi window, pịa naputa site na iOS Ngwaọrụ na pịa Malite iṅomi ka usoro ihe omume ike iṅomi ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 2. Ọ ga-ewe ole na ole nke abụọ n'ihi na nke a omume na-iṅomi gị jailbroken iOS 9 ma ọ bụ iOS 8 ngwaọrụ. Mgbe Doppler zuru ezu, ị pụrụ ịhụ niile data hụrụ na-ota n'ime Atiya na n'aka ekpe nke window. Kwado ndị naanị ngosi ehichapụ ihe nhọrọ na n'elu nke window na-egosi furu efu data naanị. Ihuchalu data iji hụ ma ọ bụ onye ị chọrọ ma ọ bụ. Mgbe ekpebi naghachi ya, ego na data na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị. N'ihi na ndetu, na kọntaktị na ozi, ị nwere ike pịa Naghachi ka Computer na-azọpụta ha na kọmputa gị ma ọ bụ pịa Naghachi ka Ngwaọrụ na-azọpụta ha azụ gị jailbroken iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka.
Ngwọta 2. naghachi Echefuola Data maka jailbroken iOS 9/8 ngwaọrụ site na iTunes ndabere
M n'aka na ị na-na na kwadoo ngwaọrụ gị tupu gị jailbreaking gị iOS 9 ma ọ bụ iOS 8, nri? Ok, bụrụ otú ahụ, ị ​​pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru naghachi furu efu data maka gị jailbroken iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka site ewepụta data site na iTunes ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 1. Ke isi window, pịa naputa site na iTunes ndabere File. Họrọ ndị ọhụrụ iTunes ndabere faịlụ nke nwere data gị mkpa. Pịa Malite iṅomi ka usoro ihe omume wepụ data gị iTunes ndabere faịlụ. Mgbe iṅomi na-okokụre, ị pụrụ ịhụ faịlụ niile na-ota n'ime udi.
Nzọụkwụ 2. Lelee faịlụ mkpa ka ị hụchalụ ha mbụ. Ọ bụrụ na ha bụ faịlụ gị mkpa n'ezie, pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị. N'ihi na ndetu, na kọntaktị na ozi, ị nwekwara ike naghachi ha maka gị jailbroken iOS 9/8 ngwaọrụ site na ịpị Naghachi ka Ngwaọrụ.
Download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị na gị ekpochi iPhone ugbu a!
Votu: Ị ga-eji Pangu ka Jailbreak iOS 9 ma ọ bụ iOS 8?
Speed ​​Up iOS 9/8: Mee iPhone agba ngwa ngwa
4 Ụzọ na Olee otú nkwado ndabere na mpaghara iPhone tupu upgrading ka iOS 9/8
Digital Media Iweghachite: Olee naghachi Lost Digital Media File
Olee otú Igosi AcomData Draịvụ Data Recovery
Olee otú Igosi Toshiba USB Flash Drive Iweghachite
Olee otú Naghachi Photos si Sony Cybershot Igwefoto
Sony camcorder Iweghachite: Naghachi Lost Videos & Photos